यिनै हुन् साहसी, हिमतवाला पाइलट बहिनि जसले आफ्नो दाई को न्यायको लागि अब चाल्दैछिन् यस्तो कदम , घ’ट’ना को वा’स्तवि’कता के हो ? (भिडियो) – NepalajaMedia
February 23, 2021 150
उनले फोटोशपवाट अर्कै फोटो तयार पारेर मिसिलमा राखेको सदिक्षाको भनाई छ । उनले सक्कली फाइल माग गर्दै अब जिल्ला प्रहरी कार्यालय जाने पनि बताएकी छन् । उर्लावारी प्रहरीले सक्कली फाइल जिल्ला पठाइसकेको बताएपछि अब जिल्लामै गएर वा स्त विकता के हो खोज्ने बताएकी छन् । प्रहरीले फाइलमै ग लत प्र माण राखेर आफ्नो दाईको ह त्या गर्नेहरुलाई प्रहरीले नै संरक्षण गरेको आ रोप प्रवीणको वहिनीको भनाई छ । उनले सो घटनाका बारेमा प्रहरीले नै छा नविन समिति गठन समेत गरिएको भएपनि आफुलाई त्यस बारेमा थाहा नभएको बताएकी छन् ।
Prevरवि लामिछानेले खोले नयाँ टेलिभिजन, रमेश प्रशाई, दिपकराज गिरि, इन्दिरा जोशी लगाएत यी चर्चित ब्याक्तिले चलाउने छन् यी कार्यक्रम (भिडियोसहित)
Nextइतिहास रच्दै रबि लामिछानेले यसरी धुमधामसँग नयाँ टिभी खोले । ‘सिधा कुरा’ आउँछ कि आउँदैन ? (भिडियो हेर्नुस)
दिल्लीका अस्पतालहरुमा अक्सिजन सकियो, अक्सिजन कुर्दाकुर्दै जीवन गुमाउनेको संख्या बढ्दै